Semalt: Chii Chibhadharo Chekunyengera Uye Nzira Yokudzivisa Icho?
Kubhadhara kukweretesa kunoreva chero chero ipi zvayo yemutemo usingabvumirwi nemutemo kana wenhema wakapomerwa nehupomberi. The scammer inowana ruzivo rwemunhu, mari, uye zvimwe zvikamu zvekufarira kubva kune akabatwa.
Oliver King, Mutengi Wekugutsikana Kwevateresi Semalt , anogovera pfungwa dzinokosha dzichakubatsira kutarisana nekutsvaga paIndaneti - m2 bullet ubiquiti.
Izvi zvinotevera nzira dzekubhadharwa kwekubiridzira:
Kutengeswa kana kutengesa zvinhu.
Kutengeswa kusina kubvumirwa kana kubiridzira.
Bounced kana kudzoka cheki, zviyengeri zvekubhadhara.
E-commerce masangano anotarisana nekutengesa magetsi kuti akumbire kubhadhara kubva kune vatengi. Sezvo zvakadaro, nhamba yekutengeserana kwekombiyuta yakawedzera kukurudzira kuwedzera kwemaitiro ekunyengera.
Rudzi rwakasiyana-siyana rwekubhadhara rusheni runosanganisira:
Peji ipi neipi yepaIndaneti inodikanwa nedunhu rega rega sebhangi rebhangi kana kadhi rechikwereti riri pangozi yekurwisa uku. Mune zvinyorwa ndeyepamutemo, somuenzaniso, mumwe mudzimai ane bhangi, chikwata chacho chakavimbika. Asi, kana zvikonzero zvisinganyatsozivikanwi, zvinogona kuratidza kupindira kwekuwana dhigirii zvisiri pamutemo.
Icho chinowanzogadzirisa chinowanikwa kunze kwenzvimbo ye digital digiti. Zvinowanzoitika kana mumwe munhu achizvienzanisa nemumwe munhu uye anoshandisa dhesi yake kuti aite zvimwe zvemhosva. Kuzivikanwa kuparwa kwemhosva kunonyanya kuurayiwa kuburikidza kushandiswa kwevanhu veWi-Fi semugwagwa wokupamba zvikwangwani zvekutumira.
Zvinowanzoitika kana muchengeti achivhara chikamu che e-commerce yako nzvimbo uye anotungamira vashandisi vewebhu kune imwe nzvimbo yepamusoro.Indaneti isina kudiwa mune dzimwe nguva inotungamirirwa nezvinhu zvinokuvadza zvinoshandiswa nevakaipa kuwana nzira ye network network security.
Wire kutengesa uye zvakanyanya kutsvaga mubhadharo:
Vanotsvaga vanotarisa e-commerce vatenzi nevashandi vekadhi rechikwereti nekukumbira mari vasati vadzorera kadhi rechikwereti kana mari munguva inotevera.
Utsotsi urwu hunoitika apo vashandisi vanozarura kambani yevatengesi munzvimbo inoita sangano rinoratidzika seine mhosva uye vanoita kudzoka kubva kumakadhi okukwereta akabiwa. Izvo zvinotyisa zvinovhara pasi maakaunti vasati vadiki vemakadhi vaona kuti mari yakaipa.
Kunyengera kunoitika sei?
Vanyengeri vakagadzirisa muitiro wekuwana zvisiri pamutemo ruzivo rwepamusoro paIndaneti. Muzviitiko zvakawanda, vashandi vanozviita sevamiririri vechokwadi uye vane foni dzekadhi yekwereti vachikumbira deta yakaoma. Nokudaro, vanoshandisa nzira dzinotevera dzekubatana kuti vabvise ruzivo rwemunhu.
Kutumira tsamba pakarepo
Kutumira mamware kune magadget
Kugadzira migwagwa kunzvimbo dzakashata
Nhamba dzemakororo dzinobatanawo kuti dziwanike mitambo yekuchengetedzwa kwenyika kuburikidza nekuwana mavara kana marita asingatarisi. Kuvapo kwezvipembenene izvi kunobvumira vatsveki kuti vawane ruzivo mukati mekudzidzira moto.
E-commerce ingashandiswa sei kuderedza udzvinyiriri?
Zvakaoma kubvisa zvachose njodzi inobatwa nekunyengedzera pane yako e-commerce store. Iwe unogona kutora matanho anotevera ekuchengetedza bhizinesi rako kusabhadhara ufeve:
Shandisa maoko nemushandisirwo wekubhadhara.
Kugadzira hurongwa hunoenderana nekuwana kune zvakakosha data.
Ita chekuchengetedza chekuchengeteka pane nguva dzose uchishandisa anti-virus software.
Iva nechokwadi chokuti muchengeti angapinda mu-akhawunti yega yega asati atenga.
Iva nechokwadi chokuti iyo inotora data uye zviratidzo zvinoshandurwa nguva dzose.
Kubiridzira kunokanganisa iwe uye mutengi wako. Nekukakavara kuchengetedza yako e-commerce nzvimbo panzvimbo yekubiridzira, iwe unogona kubudirira kuvimbika kwebhizimisi rako.